Jly Solamena : « Manàna Finoana » (+vidéo)
Tokony haka lesona amin’ny Soratra Masina ny mpandala ny ara-dalàna araka ny hafatra nampitain’ny Jly Solamena teo amin’ny Kianjan’ny Finoana. Tsy tokony hiraviravy tanana ny rehetra fa hiasa am-pinoana amin’ny fanomanana sahady ny fahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA. Ireo rehetra sendra vanim-potoana fisalasalana kosa dia tokony maka saina kely fa tsy mandemy na manimba ny sain’ny mpiara-mitolona. Ny fampiantoana ny fandraisana anjara amin’ny andrim-panjakana dia miteraka horohoro hoan’ny FATE ary tena mahatonga azy ireo hametra-panontaniana momba izay ambadik’izany. Tsy tokony manome endrika fahalemana manoloana izany ny zanak’i Dada fa tokony sahy mirehareha amin’ny firasain-kina izay iainana ao anatiny.
Ho afa-baraka ny SADC raha …
Miandry ny hetsika izay hataon’ny SADC avokoa ankehitriny izao tontolo izao momba ny famahana ny olana eto Madagasikara. Maro ny fe-potoana izay maha-ratsy toerana an’ity vondrona ity sy ny Afrikana Tatsimo rahatoa ka tsy mitondra vahaolana ny fivoriana hatrehiny manomboka ny zoma hoavy izao. Nambaran’ny Jly Solamena anefa fa « tsy azo eritreretina ny mbola hampitarazoka ny fepetra tsy maintsy ho raisin’ny SADC ary izay no mahatonga an’i tgv tsy sahy mirehareha intsony ankehitriny ».
Fanehoan-kevitra malalaka : nisantatra ny fitakiana ny Ankolafy RAVALOMANANA (+vidéo)
Namaky lay ny fitakiana ny fahafahana maneho hevitra malalaka ny Ankolafy RAVALOMANANA fony nikasa hanao tatitra tamin’ny vahoaka ireo CST sy CT avy ao aminy. Nanomboka tamin’io 28 Aprily 2012 io dia nivoaka tamin’ny fahanginany avokoa ireo vondrona sy firehana isan-karazany izay mitaky ny hisian’izany sehatra malalaka ahafahana maneho hevitra izany ary indrindra ny hanajana ny satan’ny Kianjan’Ambohijatovo izay efa nohamasin’i tgv ho Kianjan’ny demokrasia.
Tsy mihemotra amin’izany akory ny Ankolafy saingy miverina kosa maka saina sy maka bahana ao amin’ny kianjany. Ny fotoana eo amin’ny Kianjan’ny Finoana mantsy dia natao hifanakalozan-kevitra sy hifampitana vaovao mba tsy handeha amin’ny lalana tsy izy ny tolona.
Asa avy hatrany …
Manana adidy ny mpiara-dalana amin’ny Filoha RAVALOMANANA rehetra ny hampahafantatra amin’ny mpiara-monina ny tena maha-izy azy ny Ankolafy. Na dia maro aza mantsy ny fihetsehana etsy sy eroa dia ny fahamasahana ara-poto-kevitra no tsy hahavoahozongozona ny mpandala ny ara-dalàna. Ankoatra izay dia tokony ifantohan’ny isam-batan’olona sahady ny fanomanana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA mba tsy ho tara amin’izay mety fepetra tokony ho raisina ny tsirairay.
Antsojay isan-karazany : lasibatra ny olo-marina (+vidéos)
Ankoatra ny Filoha RAVALOMANANA mianakavy dia iharan’ny herisetran’ny FATE avokoa izay rehetra mijoro amin’ny fahamarinana. Isan’izany ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM izay mizaka izany mandava-taona hatramin’ny 2009 no mankaty. Taorian’ny famingavingana ny Pastera Lala Haja Rasendrahasina, Filohan’ny FJKM, dia mizotra mankany amin’ny fanagejana ny fananan’ny Fiangonana ny fampiharana izany herisetra izany. Ny voamariky ny maro dia ny fampanjakana ny marina mihitsy no tsy zakan’ny mpanongam-panjakana. Matahotra an’io fahamarinana io mantsy ireo milaza fa mpitondra amin’izao fotoana satria maro loatra ny fitondran-tenany tsy mendrika tiany ho saromana tsy ho hitan’ny mpiray tanindrazana.
Miandry fatratra ny Malagasy
Na dia ezahina afenina aza dia fantatra fa manimanina ny fotoana nitondran’ny FIloha RAVALOMANANA ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy. Tsy mijaona an-drenivohitra izany fa hatrany ambanivolo izay tontolo tena nanana ny maha-izy azy tao anatin’ny fito taona nitondran’ny Filoha. Ny fanovana andrasan’ny ankamaroan’ny Malagasy dia ny fahafahana manilika izay fositra nahatonga izao krizy lavareny izao ary vitsy rahateo ny manoha-riana amin’izany. Aorian’izay dia ny hahafahan’ny olom-pirenena miverina mibanjina ny fampandrosoana marina ny Tanindrazana miaraka amin’ny Filohany. Asa goavana miandry ny Malagasy manko ny fanarenana taorian’ny fandalovan’ny tgv nanao gaboraraka ny Firenena. Ny Filoha RAVALOMANANA dia efa nanome toky fa miasa ho amin’izany na dia sesitany tsy fidiny noho ny hetraketraky ny « ory hava-manana » aza.
Alamina aloha ny tany vao mandamin-draharaha (+vidéo)
Tsy fandaminana Firenena ny fifidianana fa fanao amin’ny tany efa milamina. Ny lahateny nataon’i tgv nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety androany dia nahitana fa efa mibanjin sahady ny fifidianana ny tenany na dia mbola midongy hanampy taona iray amin’ny tetezamita aza. Tsy misy resaka anefa izay mety fifandaminana azo atao mialoha ny hirosoana amin’izany fa dia ny hanao rebik’ondry amin’ny tetezamita no hany fantany. Raha ny vahoaka maro an’isa anefa no anontaniana dia mazava fa ny hametrahana fitoniana aloha no tena hamehana mba ahafahan’ny olom-pirenena mahatsiaro fa mandry fahalemana.
Ny tena raharaha dida tsy ao anatin’ny fahitany ny toe-draharaha ny mba hitsinjovana izay sosialy efa maharary ny vahoaka fa ny famporisihana ny bebôty hijoro ho hery famoretana no nanteriny. Hany ka sahy milanja ny maha-mpisolovava ny ratsy azy ny Jly Baomba sy ireo namany ka tsy mba miheiv-tena ho diso fa dia mandrangaranga fampihorohoroana ho an’izay rehetra te-hijoro noho ny fahamarinana.
19 Mey 2012 : faritra mena ho an’ny zanak’i Dada ny eny Ambohijatovo (+vidéo)
Hanotrona ny hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ny mpandala ny ara-dalàna rahampitso atoandro ary hihazo ny Kianjan’ny Finoana avy hatrany avy eo. Maro mantsy ny hetsika eto an-drenivohitra ary samy manana ny hanitra hoazy saingy ny foto-kevitry ny zanak’i Dada dia tsy mivaona amin’ny famerenana ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara mba ho afaka ho fidiana indray. Ny hetsika sadasada itondrana vahoaka etsy sy eroa dia ahiana manana endrika hanapasahana ny hetsiky ny mpomba ny ara-dalàna fotsiny.
Rahampitso rahateo dia fotoan-dehibe ny eo amin’ny Magro satria, ankoatra ny tatitra hataon’ny lehiben’ny delegasiona, dia hitafa mivantana amin’ny mpiara-mitolona rehetra ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Isan’ny mamelom-bolo ny hafanam-pon’ny vahoaka ny mandray ny hafatry ny Filoha sy ny fampitam-baovao avy aminy. Isan’ny mbola maha-tsara toerana ny ankolafy tarihiny mantsy ny toerana misy azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izay ampian’ny fonenany any ivelany amin’izao fotoana izao. Ny fotoana iarahana amin’ny HMF kosa etsy ankilany dia hanomezam-boninahitra ny hetsika fitakiana ny fahamarinana nandatsahana ny ràn’ny mpiray tanindrazana teny amin’ny FIGN ny 20 Mey 2010. Ho fahatsiarovana ihany koa ny mpanompon’Andriamanitra Pastera Rivo Ranaivo Harison izay lavo teo am-perinasa noho ny hetraketraky ny hery famoretana tamin’io andro io ihany.
Tondro zotra : any amin’ny SADC ny baolina ! (+vidéos)
Maro ny fitarainana efa nalefan’ny Ankolafy RAVALOMANANA tany amin’ny SADC mikasika ny fomba fanatanterahana ny tondro zotra. Ankehitriny dia efa nilaza ity vondrona aty amin’ny faritra atsimon’i Afrika ity fa ho saziana ireo izay mbola mamingapingana ny fanatanterahana ity fifanarahana ity. Raha toa ka tena mitsara ara-drariny ny SADC dia hahita mazava fa maro ny fandeferana efa nataon’ny Ankolafy RAVALOMANANA mba ho fitsinjovana ny famahana ny krizy saingy nanaovan’ny FATE be marenina izany rehetra izany.
Araka ny fanazavana izay nentin’ny depiote mamitiana Ravelonanosy dia «voahaja tsara ny tondro zotra eo amin’ny andininy izay mametraka an’i tgv ho filohan’ny tetezamita fa rehefa eo amin’ny andininy mampody ny Filoha RAVALOMANANA dia voadingana ». Manao antso avo amin’ity vondrona manelanelana eto Madagsikara ity arak’izany ny Ankolafy mba hijery marina izay tsy manaja ny tondro zotra na dia efa lalàna velona aza izany.
Tsy fotoanany izao …
Nomarihin’ny depiote Henri Randrianjatovo arak’izany fa « tsy fotoana tokony hisaraham-bazana izao ». Maro ny hevi-dratsy ampiasain’ny mpanongam-panjakana handravana ny hetsika eo amin’ny Magro satria isan’ny hery iray ho an’ny Filoha RAVALOMANANA io ary manelilgelina ny FATE amin’ny tetika tiany hatao. Araka ny fanazavana nentin’ity solombavam-bahoaka teo aloha ity dia mizotra mankany amin’izany « zarazarao anjakany » izany ny zava-mitranga mitarika savorovoro ao Behorirka hatramin’ny sabotsy no mankaty. « Hararaotin’ny sasany ny tsy fitovian-kevitra » hoy izy « andranitana fifandrafesana anaty mba hamparefo ny tolona ». Manantena arak’izany Henri Randrianjatovo fa hanatsara zavatra ny fahasahiana maneho hevitra satria « ny isavorovoroan-kilantoana » hoy ny fahendrena Malagasy. Niangaviany kosa anefa ny rehetra mba ho sahy hifanantona amin’ireo mpitarika any amin’ny foiben’ny Ankolafy raha misy ny fanakianana « mba hialana amin’ny fanararaotana ety an-kianja ».
Guy Maxime Ralaiseheno : « tsy maintsy vakintsika Ambohijatovo » (+vidéo)
Hiverina haka ny Kianjan’ny Demokrasia ny Ankolafy RAVALOMANANA ny sabotsy 12 May izao. Araka ny fanazavan’ny mpitari-tolona teo amin’ny Kianjan’ny Finoana dia vonona « hilalao » miaraka amin’ny ekipan’ny Jly Baomba ny vahoaka. Sahy milaza fa ampy fanazaran-tena amin’izay ny mpandala ny ara-dalàna taorian’ny daroka mahamay nahazo azy ireo ny 28 Aprily teo. Na izany aza dia nampitandrina ny hery famoretana ihany i Guy Maxime satria « tsy mbola nisy fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny tanàna manafoana ny Kianjan’ny Demokrasia » hoy ny fanazavany.
Midika izany fa manan-jo hisitraka ny fahalalahana mampiasa io Kianja io koa ny vahoakan’ny Magro. Nambaran’ny filohan’ny AMM moa fa isan’ny manoratra ny tantaran’ny Firenena iray ny hetsi-bahoaka ao aminy ary mitaky fahasahiana ny manoratra ny tantaran’i Madagasikara. Manainga ny fahatsiarovan-tenan’ny olom-pirenena tsirairay ny tenany satria « ady io amin’ny sabotsy io » hoy izy « noho izany dia mila maro an’isa isika ». Nambarany koa fa fotoana tokony handraisana andraikitra izao fa tsy fitazanam-potsiny intsony. Efa mahery vaika ny krizy ary mandondona eo am-baravaran’ny rehetra ny fahantrana noho izany dia miantso ny vahoaka ho sahy ny Ankolafy RAVALOMANANA ary manome fotoana ny rehetra eny Ambohijatovo ny sabotsy hoavy izao.
FATE : fanagejana no tanjona … (+vidéo)
Izay rehetra mety endrikin’ny fahafahana eto Madagasikara no tsipahin’ny mpanongam-panjakana hatramin’ny taona 2009. Tohizan’izy ireo hatramin’izao izany ary isan’ny lafiny tsipahin’izy ireo ao anatin’ny tondro zotra. Ireo andininy rehetra izay mametraka ny fitoniana manko dia manome fahalalahana ny olom-pirenena isan-tsokajiny hisitraka ny zo maha-olona azy. Ireo mihitsy anefa no tsy tanterahin’ny FATE amin’izao fotoana.
Nahagaga ny mpanara-baovao ny mizana tsindrian’ila eo amin’ny resaka fanaovan-gazety amin’izao fotoana. Tsaroan’ny rehetra ny nahazo ny hainoamanjery rehetra izay nahafahan’ny mpandala ny ara-dalàna nampita hevitra. Ankehitriny anefa dia maro ny fioharam-pefy misy eny amin’ny onjam-peo saingy rehefa manadroadro ny fitondrana izy ireny dia mandry ivohon’ny vato.
Nalaza indray tato ho ato ny resaka baomba etsy sy eroa. Mivadika tanteraka ny rasa satria tsy inoan’ny Malagasy intsony ny fanaparam-pahaizana ataon’ilay jeneraly iray izay nahazo petak’anarana « Baomba » mihitsy. Misy mihitsy aza ny sahy milaza fa mety ity farany ihany no mampametraka azy ireny ahafahana miampanga ny zanak’i Dada indray. Tsy tokony odian-tsy hita koa anefa fa mety sarin’adin’ny mpanjanaka izy ireny ahafahany mametraka hery miaramila eto Madagasikara « hiaro ny Frantsay rehetra ».